Kedu ihe bụ Makefile na kedu ka ọ si arụ ọrụ n'ime Linux? | Site na Linux
Si chọrọ ịgba ọsọ ma ọ bụ melite ọrụ mgbe emelitere ụfọdụ faịlụ, na-eme na ịba uru nwere ike abịa kemfe. Uru ime chọrọ faịlụ, makefile, nke na-akọwa usoro ọrụ aga-eme.
Aha a ga - ada ụda nke ọtụtụ n'ime gị ka ị nwere ike iji kpokọta mmemme site na koodu isi. Imirikiti oru mmeghe na-eji eme ihe iji chịkọta ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ, nke enwere ike itinye ya site na iji ntinye.
N'oge a ka anyị ghọta otú ụdị faịlị a si arụ ọrụ n'ime Linux.
Faịlụ profaịlụ A na - ahọpụta ya n'ụzọ dị iche iche dị iche iche:
Iwu doro anya.
Iwu doro anya na-agwa faịlụ nke dabere na faịlụ ndị ọzọ, yana iwu achọrọ iji chịkọta otu faịlụ.
Ọ bụ ezie na ndị dị ọcha yiri nke ndị ahụ doro anya, mana na ọdịiche ha na-egosi iwu iji mezuo, mana na-eji ndọtị faịlụ ahụ iji chọpụta iwu ndị ị ga-eme.
N'ihe atụ a, anyị agaghị eji ndị ikpeazụ a, Naanị anyị ga-amalite site na ibipụta akwụkwọ ndị ochie "Ndewo "wa" na ọnụ.
Maka nke a, anyị ga - emepụta ndekọ efu na aha ịchọrọ.
Na nke a ka anyị kpọọ ya "atụ-atụ" na n'ime nke a Anyị ga-emepụta profaịlụ na ọdịnaya ndị a:
Ugbu a na-agba ọsọ na faịlụ site na iji kọmputa ede ka n'ime ndekọ na, na mmepụta ga-:
Dịka ị pụrụ ịhụ mgbe e mere ọsọ mmempi ahụ, iwu ahụ na-ekwughachi "Ndewo "wa", ihe ntinye nke iwu ahụ sochiri. Anyị anaghị achọkarị nke ahụ. Iji gbochie mmepụta a mgbe ị na-agba ọsọ, gbakwunye "@" tupu ikwughachi:
Ezigbo ihe atụ nke a bụ:
Ugbu a anyị nwere ike ịga n'ihu na-agba ọsọ anamfile ọzọ. Mmepụta dị naanị nke a kwesịrị igosi:
Nke a mara ezigbo mma. Mana dị ka ị maara, etinyere azụ nwere ọtụtụ ihe, nke ha na-egosi usoro ịgbaso.
Anyị nwere ike itinye ụfọdụ usoro dị mfe na faịlụ a.
Kedu anyị na-aga ime bụ dezie faịlụ dị ka ndị a:
Mgbe ị na-emegharị ihe ọzọ, nke a ga-emezu ebumnobi mbụ. Nke ahụ bụ n'ihi na naanị ihe mbụ e lekwasịrị anya na makefile bụ ndabere ndabara.
Iji na-agba n'usoro ọ dị mkpa igosi ya n'ime faịlụ ahụ na "niile". Ọ bụ ọrụ dịịrị "ebe ahụ" ịkpọ ndị ọzọ ebumnuche.
You nwere ike ịga n'ihu igbu mee ọzọ ị ga-ahụ na n'ime ndekọ ahụ faịlụ a na-akpọ "File.txt".
N'otu ụzọ ahụ ọ ga-ekwe omume inwe ike imezu ihe ebumnuche n'ime faịlụ faịlụ ahụ, a na-ejikarị ya eme ihe.
Anyị ga-agbanwe faịlụ anyị ma anyị ga - agbakwunye ihe ndị a na njedebe:
I nwere ike rerun-eme ka ọ ga-recreate faịlụ txt. Dị ka ị ga-ahụ, ọ ga-eme otu ihe ahụ dịka oge gara aga. Ma ugbu a, anyị ga-emezu ihe ahụ dị n'ime faịlụ profaịlụ.
Anyị na-eme nke a:
Site na nke a anyị nwere ike ịmụ ihe bụ isi gbasara imepụta faịlị na etu ha ga-esi baa ezigbo uru ma ọ bụrụ na anyị chọrọ imezi ihe ụfọdụ.
O doro anya na ị nwere ike ịmepụta faịlụ buru ibu ma dị mgbagwoju anya, mana nke a bụ naanị ihe atụ maka ndị ọhụrụ (m gụnyere onwe m) ndị na-amata otu esi arụ ọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Kedu ihe bụ Makefile na kedu ka ọ si arụ ọrụ n'ime Linux?
Ihe na-adọrọ mmasị. Ajuju ... ihe ị na-akpọ "mgbanwe" agaghị abụ ọrụ ma ọ bụ ụzọ?
N'ezie, ee enyi m, daalụ maka mgbazi ahụ.
Magburu onwe ya, enwere m olileanya na ị ga-egwu ala.
Ọ dịghị otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html, bụ "lekwasịrị anya"
Zaghachi na ManuelALcocer
Olileanya ha gara n'ihu na-akọwa ihe ndị dị ka nke a, "ebe niile na elementrị", nke Linux na-arụ kwa ụbọchị, nke onye ọbụla na-akọwaghị otu agụụ ahụ etu esi ekwupụta "uru na ọrụ" ndị ahụ.
OpenSUSE Tumbleweed na-eji Linux Kernel 4.18 eme ihe, na-agbakwunye nkwado AV1